दुःख जीवन रहेछ, दुःखै गरौं – News Portal of Global Nepali
13th September 2018 मा प्रकाशित
राधिका कार्की थापा, अध्यक्ष महिला सीप विकास केन्द्र, इटहरी
बेलायतको लिभरपुलस्थित जोन मुरे विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने पाठ्यक्रममा २५ नेपाली महिलाको सफलताको कथा राखिएको छ । त्यसमा इटहरीको सामाजिक परिचालक तथा उद्यमी राधिका कार्की थापाको पनि नाम छ । उनले सिलाइ बुनाइबाट उद्यम सुरु गरेकी हुन् । अहिले महिला सीप विकास केन्द्र सञ्चालन गरिरहेकी छन् । उनको सीप विकासबाट पाँच सयभन्दा बढीले तालिम लिएर आत्मनिर्भर बनिरहेका छन् । स्कुल फि तिर्न सकेर अध्ययन पूरा गर्न नसकेकी राधिकाको जीवनले कसरी कोल्टे फे-यो भन्ने विषयमा कुमार राउतले गरेको कुराकानी–
० के काम गर्छ महिला सीप विकास केन्द्रले ?
– महिलालाई सीप सिकाएर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ । विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सीप सिकेर हामी महिलालाई स्वरोजगार बनाउने प्रयत्नमा छौं ।
० कस्ताले सीप सिक्न पाउँछन् ?
– गरिबी निवारण लघुउद्यम कार्यक्रमअन्तर्गत हामीले परियोजना सञ्चालन गरेका हौं । विशेषतः दुर्गम, दलित, असहाय तथा सीप सिकेर आत्मनिर्भर बन्ने इच्छाशक्ति भएका महिलाहरूलाई हामी समेट्छौं ।
० अहिलेसम्म कतिले सीप सिके ?
– पाँच सयभन्दा बढीलाई हामीले सीपमूलक तालिम दिइसकेका छौं । धेरैजसो उहाँहरू आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा हुनुहुन्छ ।
० के सीप सिकाउनुभयो ?
– बजारको आवश्यकता र उद्यमी बन्ने चाहना राखेका व्यक्तिले चाहेको सीप हामी सिकाउँछौं । विशेषतः ब्युटिपार्लर सञ्चालन, मौरी पालन, ढाका बुनाइ, जाम बनाउन सिकाउँछौं । स्थानीयस्तरको कच्चा पदार्थको खपतलाई ध्यानमा राखेर सीप सिकाउँछौं । सीप सिकाउन हामीले कलेज सञ्चालन गरेका छौं । उक्त कलेजबाट १० महिना तालिम लिएको जाँगरिलो व्यक्ति बेरोजगार बन्नुपर्दैन ।
० महिलाले लिने तालिम यिनै मात्र हुन् ?
– होइन, व्यक्तिको क्षमतालाई ध्यानमा राखेर हामी तालिम दिन्छौं । ड्राइभिङ, नेतृत्व विकास तथा सहकारी सञ्चालनसम्बन्धी पनि हामी तालिम दिन्छौं । समूह बनाउने र बचत गर्न पनि सिकाउँछौं ।
० तालिम लिएर सहकारी खोल्ने पनि छन् ?
– छन्, पहाडी क्षेत्रमा पनि सहकारी सञ्चालन भइरहेको छ । समूहमा बचत गर्ने र त्यही बचतबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू धेरै छन् । हामी उहाँहरूलाई फ्लोअप गरिरहेका हुन्छौं ।
० तपाईंहरूले पनि सहकारी सञ्चालन गर्नुभएको छ ?
– छ, तलेजु बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन गरेका छौं । दुई कार्यकाल म आफैंले नेतृत्व गरेकी थिएँ, अहिले हाम्रै संस्थाको सचिव अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
० कतिले रोजगार पाएका छन् ?
– ५–७ जना कर्मचारी हुनुहुन्छ । वार्षिक रूपमा एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्छौं । धेरै बचतकर्ता भएकाले थोरै बचत गर्दा पनि ठूलै रकम जम्मा हुन्छ ।
० कतिसम्म ऋण प्रवाह गर्नुहुन्छ ?
– ऋण प्रवाह गर्नुअघि हामी सीप सिकाउँछौं । दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्छाैं ।
० लगानी जोखिम कत्तिको छ ?
– लगानीका जोखिम एकदमै धेरै हुन्छ । तर ऋणीको मेहनत, लगनशीलता र नियतलाई ध्यानमा राखेर ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ ।
० सीप सिकाएर महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भनेर कसले पे्ररणा दियो ?
– बुवाले । विवाह गर्नुहुँदैन, तर आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने पे्ररणा बुवाले नै दिनुभएको हो । सुरुमा मेरो टेलरिङ थियो । १५ रुपैयाँमा चोलो सिलाउँथे । यस्तो काम अरु महिलाले पनि सिके भने आत्मनिर्भर बन्न सजिलो हुने रहेछ भन्ने लाग्यो ।
० लुगा सिउने पेसा गर्दा अरुले के भन्थे ?
– मलाई चाहिँ यो पेसामा मज्जा आउँथ्यो, अलि काली पनि थिएँ, पछाडि कुरा काट्नेहरूले मलाई दमनी भन्दा रहेछन् । आफन्तले चाहिँ यो दमाई पेसा नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्थे ।
० विवाह गर्नुभएन ?
– गरें, २९ वर्षमा विवाह भयो, इटहरीकै रमेश थापासँग मैले पे्रम विवाह गरेकी हुँ । अहिले दुई छोरी र एक छोरा छन् । ठूली छोरीले १२ सकिन् । दुई साना नानीहरू स्कुल पढ्दै छन् ।
० कति वर्ष पे्रममा बित्यो ?
– दुई तीन वर्ष पे्रम गरियो, त्यसपछि विवाह भयो ।
० कसले पहिला मन परायो ?
– दुवैले मन पराइयो होला । मेरो र उहाँको पसल नजिकै थियो । एकअर्कामा हेराहेर हुँदाहुँदै पे्रम बसेछ । इटहरी छोडेर जानुपर्दैन भनेर पनि उहाँसँग नजिक भएँ ।
० इटहरीवासी बन्नुभयो ?
– हो, २०५२ सालदेखि अहिलेसम्म इटहरीमै छु । म आफ्नो पेसा र व्यवसायमा छु । उहाँ आफ्नो व्यवसायमा हुनुहुन्छ ।
० अहिले सबै ठीकठाक छ ?
– सबै कुरा मिलेको छ । दुःखले मात्र जीवनको अर्थ सिकाउँदो रहेछ । जीवनमा धेरै दुःख गरियो । अहिले हामी सन्तुष्ट छौं ।
– यतिबेला बीएडको परीक्षा चलिरहेको छ, परीक्षामा व्यस्त छु । विविध कारणले उमेरमा पढ्न सकिने वा पाइनँ । अहिले पढ्ने इच्छा लाग्यो, त्यसैले पढ्दैछु ।
० यो उमेरमा पढेर के गर्नुजस्तो लागेन ?
– लागेको छैन, पढ्ने इच्छा भएकाले लुकीलुकी किन पढ्नुप¥यो ?
० पहिला किन पढ्नु भएन ?
– फि तिर्न नसकेर । परिवार ठूलो थियो, दुई दिदीहरूलाई पढाउनुभयो । हाम्रा पालामा आइपुग्दा बुवासँग हाम्रो स्कुलको फि तिर्ने पैसा हुन छाड्यो । आफैले पैसा कमाउन थालेपछि एसएलसी दिएँ, पास गरें ।
० पढ्नुपर्ने रहेछ ?
– जागिर खान होइन, कामको सिलसिलामा कुनै अवसर आयो भने कति पढेको भनेर सोध्छन् । स्नातक पनि नगरेको भन्दा मनै अमिलो हुन्छ । त्यसैले स्नातक सक्ने अठोट लिएर पढ्न सुरु गरेकी हुँ ।
– लोकतन्त्रमा आस्था राख्छु, रुखमा मतदान गर्छु, तर कुनै पद लिएकी छैन । तर पार्टीले आवश्यकता ठानेमा सेवा गर्न तयार हुन्छ ।
० कांगे्रस नै किन नि ?
– म मात्र होइन, मेरो माइतीतिर तीन पुस्ते कांगे्रस हुन् । ससुरा चाहिँ इटहरीको प्रधानपञ्च भइसक्नुभएको रहेछ । श्रीमान् राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्न । असल नेतृत्व छनोटमा मात्र सहभागी हुनुहुन्छ ।